वित्तीय बानी के छ
यस्तो वित्तीय बानी रूपमा अवधारणा लोकप्रिय भन्दा आजकल थप छ, तर धेरै मान्छे जसबाट टाढाको कुनामा आफूलाई जबरजस्ती तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। यो हामी प्रत्येक को व्यक्तिगत आय, साथै सिधै निर्भर छ जो खरीद, गर्न मुख्यतया सम्बन्धित छ अन्य खर्च, हामी वा किन्न सक्छन् सक्दैन छ। स्वीकार्य छन् भन्ने वित्तीय बानी के हो, र लायक बलिदान के हो बारेमा, यो लेख हेर्नुहोस्।
धेरै आधुनिक मान्छे को मुख्य शत्रु ऋण हो। तिनीहरूले अनुभव फाइन्यान्सरों, कुनै पनि ऋण भन्न रूपमा - तपाईं कमाउन भन्दा बढी खर्च गर्न इच्छा तर केही छ। यो प्रश्न implies: "? के मान्छे ऋण दासत्व, अक्सर ऋणी द्वारा निर्माण गरिएको छ जो वसूल, आफ्नो हालतमा परे बाँच्न गराउँछ" जवाफ सरल छ: वित्तीय बानी हानिकारक र उपयोगी छन्। पहिलो छनौट, तपाईं आफ्नो अवस्था बढन। राम्रो, यदि तपाईं अझै पनि दोस्रो सिद्धान्त द्वारा निर्देशित छन्, त्यसपछि बाँकी यस्तो आश्वासन दिनुभयो: वित्तीय सफलता टाढा बन्द छैन।
सबै भन्दा साधारण बटुवा "भावनात्मक" किनमेल को शत्रु हो। यो आवश्यकता एक व्यक्ति निरन्तर आफैलाई नयाँ कुरा, trinkets, घरेलू वस्तुहरू Indulge। दुर्भाग्यवश, हामी धेरै कुराहरू कि, सिद्धान्त मा, आवश्यक छैन को अधिग्रहण लागि दाना खरिद गर्न प्रोग्राम भने। यी वित्तीय बानी हटाउनु गर्न, धनी मान्छे को सिद्धान्त सुरु गर्न प्रयास गर्नुहोस्: साँच्चै आवश्यक छ के पैसा छोडूँगा छैन। विशिष्ट किनमेल सूची राख्न र प्रत्येक वस्तु पक्कै लेख्न हुनेछ नजिकै, तपाईं यो कुरा किन चाहिन्छ। सोही, तपाईं अग्रिम तपाईँको किनमेल योजना यदि अझ प्रभावकारी योजना, हुनेछ। त्यसपछि यो ठीक के हो किन्न एक अनूठा चाहनाको गर्न वा यसलाई बाल्न हुनेछ, र विकल्प थप उद्देश्य हुनेछ।
निर्भरता - छैन एक व्यक्ति को सबै भन्दा राम्रो गुणस्तर, र यो शांत गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हितमा मिलाउ भनेर। एक व्यक्ति पैसा, लागूपदार्थ वा रक्सीको लागि रेसिंग, जुवा मा अवशोषित गर्न सकिन्छ। यी सबै पक्षहरू पनि स्नायु प्रणाली बिगार्छ र जो धेरै गाह्रो छ भुक्तानी गर्न ऋण मा त्वरित। यो अवस्था बाहिर प्राप्त गर्न आफ्नो आर्थिक व्यवहार समीक्षा गरेर सम्भव छ। तपाईँको शरीर दृढ रक्सी संलग्न छ र यसको खपत आवश्यक हुन्छ भन्न गरौं। त्यसपछि हामी बानी वित्तीय क्षेत्र मा, अर्थात् मादक पेय खरीद पैसा खर्च गर्न आफैलाई दिन छैन परिवर्तन। धन नजिक मान्छे को संरक्षण को लागि लिएको वा बस छैन भनेर आफूलाई विश्वस्त हुन सक्छ।
अक्सर पैसा बर्बाद बानी राम्रो जीवन एउटा सही गर्न इच्छा संग जोडिएको छ। यसैले मान्छे एक कार, नयाँ घर वा महंगा लुगा किन्न क्रेडिट मा पर्न सक्छ। यस मामला मा धेरै बैंकहरू र व्यावसायिक संगठन धेरै आकर्षक भुक्तानी प्रणाली उत्पादनहरु प्रस्ताव, आफैलाई रोक्न धेरै गाह्रो छ। द्वारा installments यसलाई लिन छैन, तपाईंलाई थाहा यदि तपाईं एक खेल कार लागि हालै केही Transcendental थियो तर धेरै टाढा जान छैन। नगरेसम्म एक भुक्तानी मा भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ सम्म खरीद स्थगित आफैलाई विश्वस्त।
अब तपाईं वित्तीय बानीले हामीलाई भेट्न भावनात्मक सक्षम छन् भनेर थाह, र प्राप्त (छिमेकीको कारमा राम्रो छ मेरो भन्दा)। र कुनै कुरा आफ्नो आफ्नै पायो के श्रेणी वा, आफूलाई तपाईं कमाउन भन्दा बढी खर्च गर्न अनुमति होसियार हुन।
मन पढ्न कसरी सिक्न? हामी मिथक नष्ट र एक रात telepathic बन्न!
एक बच्चा किन नहट्न गर्छ? कारण व्यवहार, सिफारिसहरू आमाबाबुले
मस्तिष्क को अद्वितीय क्षमता रूपमा रचनात्मक सोच
पति, साथीहरूलाई पिउने हिँड्छ - के? परिवार सम्बन्ध को मनोविज्ञान
शुरुआती लागि सुझाव: एक मान्छे विपरीत सेक्स को ध्यान आकर्षित
आशाहीन अवस्था र रुचि को समस्या
आहारको भोजन - सुन्दर चित्रको लागि बाटो
एक भाषा बाधा, अर्को 10 वर्ष मा "" गिर गर्न सक्नुहुन्छ?
क्रिश्चियन Benteke: क्यारियर, उपलब्धिहरू, फोटो
कारको लागि श्रृंखला तनाव
फोन स्क्रिन रूपमा स्क्रिनसट बनाउने? Android मा स्क्रिनसट कसरी लिने?
Windows को लागि विषयवस्तु स्थापना गर्न कसरी सिफारिसहरू 7
आमाको लागि आमाको प्रार्थना - जीवन-वृत्त र उपचार
सबै भन्दा लोकप्रिय होटल Tver
फ्रान्स, सेन्जेन: कागजी कार्रवाई
आफ्नो कम्प्युटर सफाई धूलो देखि: के?
राम्रो छ - "Mukaltin" वा "खोकी ट्याब्लेटको"? प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक